भरतपुर कोरोना अस्पतालमा शौचालय बनाएको खर्च २५ लाख / गुपचुपमै अनुमोदन | PBM News.com
चितवन १७ बैशाख । ७२ घण्टामा अस्पताल निर्माण गरिएको विषयले देशभर चर्चा पाएको थियो । पुरानै संरचनालाई अस्पतालको रुपमा विकास गरिएको कोरानो विशेष अस्पताल निर्माण सुरु भएयता बेला बेला चर्चामा आउने गरेको छ । अस्पताल भित्रै कर्मचारीहरु बीच कुटाकुट भएको विषयदेखि पत्रकारलाई कुटपिट गर्ने विषय सम्मले खुब चर्चा पायो । अहिले फेरि अर्को विषयले चर्चा पाएको छ । कोरोना विशेष अस्पतालका लागि बनाइएको शौचालयमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको रकम गुपचुपमै अनुमोदन गरेको विषय चर्चामा छ ।
शौचालय निर्माण गर्दा भएको आर्थिक अपारदर्शीताको विषयमा उज्ज्यालो अनलाईनले यसो लेखेको छ । चितवन – कोरोनाको संकटमा उपचार व्यवस्थापनका लागि सहज वनाउन भरतपुर महानगरपालिकाले निर्माण गरेको भरतपुर कोरोना विशेष (अस्थाई) अस्पतालमा आर्थिक अपारदर्शिता देखिएको छ ।
७२ घण्टामा निर्माण गरिएको भन्दै प्रचार गरिएपछि देशका अन्य स्थानमा समेत यस्ता अस्थायी अस्पताल बन्न सुरु भएको थियो । देशभरका लागि नमुना मानिएको अस्पताल नै अहिले आर्थिक व्यवस्थापनमा अपारदर्शी देखिएको गुनासो बढेको छ । अस्पतालमा लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको आशंका कार्यदलमा रहेकाहरुले नै गर्दै आएका छन् ।
कार्यदलका सदस्यहरुलाई जानकारी नै नगराइ अनुमोदन गरिएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएपछि उनीहरुले आपत्ति जनाएकाछन् । यो अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि महानगरपालिकाको विपद् कोषबाट छ लाख ५० हजार रुपैयाँ पेस्की दिएको थियो । त्यसपछि वाग्मती प्रदेश सरकारले भरतपुर महानगरपालिकालाई अस्पताल सञ्चालन गर्न चैत २० गते एक करोड रुपैयाँ दिएको थियो ।
अडिट गर्ने, गराउने आर्थिक नियम ऐनअनुसार सामान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा अस्पतालका लेखापाल फडिन्द्र खनाल र अस्पतालका सदस्य सचिव डा. भोजराज अधिकारीलाई दिइएको थियो ।कोरोना अस्पताल सञ्चालन कार्यदलको बैठकमा भने महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज जोशीले एक करोड २७ लाख खर्च भएको विवरण दिएको भए पनि अस्पतालमा वैशाख १४ गतेसम्म ७४ लाख ४४ हजार ९९ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजानिक भएको देखिन्छ । अस्पतालले दिएको विवरणअनुसार वैशाख १४ गतेसम्म ७४ लाख ४४ हजार ९९ रकम भुक्तानी भएको देखिएको छ ।
अस्पतालले पीपीई र एन ९५ मास्कमा मात्रै भ्याटसहित करिब ३४ लाख खर्च गरेको देखाइएको छ । अहिलेसम्म कार्यालय सञ्चालनमा ११ लाख ८६ हजार, औषधी खरिद र मेसिनरी औजारमा सबैभन्दा धेरै ५२ लाख २८ हजार २ सय १० खर्च भएको छ । जसको लागि४५ लाख खर्चको सिलिङ तोकिएको थियो । १८ लाखको हिसाब अस्पतालले देखाउन सकेको छैन ।
मिति र तथ्यांक केलाउँदा ७ चैतमा खुलेको अस्पतालमा १५ गते अधिकांश सामान ल्याएको देखिन्छ । सामान खरिद गर्दा प्रकृया पूरा गर्न नसकेको देखिएको छ । कार्यदलका सदस्य सचिव डा. अधिकारीले विज्ञप्ति निकालेर सोमबारको बैठकले आयव्यय विवरण अनुमोदन गरेको बताए पनि कार्यदलका सदस्यहरुले आपूmहरुलाई जानकारी नभएको बताएका छन् ।
नेपालमा कोरोनाको संक्रमणबाट थप एकजनाको मृत्यु
चितवनमा चार जना कोरोना संक्रमित थपिए